Rep Power0Re: MasterCAM
IGES format ပြောင်းပြီး save လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ CAD/CAM မှာဖွင့်လို့ရပါတယ်။ Reply With Quote 10-16-2010 02:28 PM
အလဲ့ တယ်ဟုတ်ပါလား . ပုံအားလုံးရသည်ပေါ့. ကျေးဇူးပါ
Reply With Quote 01-24-2014 09:45 AM
Rep Power0Master CAM X5 crack လုပ်နည်းလေးသိရင်ပြောပြကြအုံးဗျာ.... X5 ကို crack file replace လုပ်လိုက်တာ .exe not valid error ဆိုပြီးပေါ်လာလို့
တခြား crack လုပ်လို့ရမယ့်နည်းလေးဘာလေးသိရင် ပြောပြပေးကြပါအုံးနော်..
Reply With Quote 01-24-2014 10:22 AM
Rep Power0post not fond တဲ့.... အဆင်ပြေရင် ပြန်တင်ပေးပါအုံးနော်
Reply With Quote 12-20-2015 10:27 AM
Rep Power0Master CAM X6 ကို ဆိုင်က၀ယ်ပြီး Install လုပ်တာ .exe not valid error ဖြစ်နေလို့ပါ... အသုံးပြု သူများ ရှိရင် Install လုပ်နည်းလေး ပြန်လည် ဝေမျှပါအုံးဗျာ..
AutoCAD မှ MasterCAM သို့
By Than Zaw in forum MasterCAM
Last Post: 07-07-2010, 02:39 PM
CNC Software Mastercam X4 - v13.0.3.31
By phoelapyae in forum MasterCAM
All times are GMT +6.5. The time now is 06:29 PM.